महाअभियोग र गृहमन्त्रीको राजीनामा बारे कांग्रेसमा छलफल. – Sabaikoaawaj.com
महाअभियोग र गृहमन्त्रीको राजीनामा बारे कांग्रेसमा छलफल.
सोमवार, बैशाख १८, २०७४ 7:16:09 AM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, १८ वैशाख /नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग र कांग्रेस नेतासमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाट दिनुभएको राजीनामा सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी आइतबार व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री निधिले पदबाट आइतबार नै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बेलुका बसेको बैठकले महाअभियोग र गृहमन्त्रीको राजीनामा बारे छलफल गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि कांग्रेसले जनाएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा जिल्लास्थित पार्टीको संयन्त्रले टुङ्गो लगाउन नसकेका स्थानीय तहमा पार्टीका उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाउने बारेमा वृहत छलफल गरेको छ ।
कांग्रेसले यसअघि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको केन्द्रले र बाँकी तहमा जिल्लास्थित पार्टीको संयन्त्र बनाई उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिँदासमेत अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवारको टुङ्गो लागिनसकेका कारण केन्द्रले नै टुङ्गो लगाउने बताइएको छ । निर्वाचन आयोगले यही वैशाख ३१ गते हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख १९ गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको तालिका सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले आज सोमबारसम्म निर्वाचन हुने सबै तहमा पार्टीका उम्मेदवारको टुङ्गो लागिसक्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, बैशाख १८, २०७४ 7:16:09 AM